‘कहाँ पुष्टि भयो बहुमत ?’
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आज‘कहाँ पुष्टि भयो बहुमत ?’
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश चुनावमा होमिइसकेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार आफू नेतृत्वको नेकपाको काठमाडौं जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय तयारीमा जुटिसकेको बताएका हुन्। ओलीले राजनीतिक पार्टीहरू पनि चुनावमा लागेको र जनता पनि नयाँ जनादेशका लागि आतुर भइसकेको अवस्थामा अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने बताए। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्दै केही मान्छेले जनतालाई भड्काउने र झुक्याउने प्रयास गरिरहे पनि त्यो सम्भव नहुने उनले बताए।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निर्णयमा म किन पुगें ? किनभने, लोकतन्त्र खतरामा प¥यो। संविधान खतरामा प¥यो। स्थायित्व र स्थिरता खतरामा प¥यो। उहाँहरू (दाहाल–नेपाल)को योजना के हो ? जाली समाचारहरू केही पत्रिकामा छपाएर मान्छेलाई भड्काउन झुटा समाचार प्रायोजित रूपमा प्रचार गराइएको छ’, ओलीले भने, ‘पुनःस्थापना भयो भने फलानोलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु, पुनःस्थापना हुने कुरा आयो कहाँ ? पुनःस्थापना कसले हुन्छ भन्यो ? पुनःस्थापना हुन्छ भनेर अहिले दुई–चार जना मान्छे झुक्याउन उहाँहरूले भन्नुहोला। तर, पुनःस्थापना हुँदैन।’
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका वेला ओलीले पुनःस्थापना हुनै नसक्ने दोहो¥याएका हुन्। त्यस क्रममा उनले चार्ली चाप्लिनको कथा सुनाउँदै अदालतले कुन सक्कली चार्ली चाप्लिन हो भनेर छुट्ट्याउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
‘एकपटक चार्ली च्याप्लिनको क्यारिकेचर गरेर कम्पिटिसन भयो। केही प्रतिस्पर्धी भए। चारवटा फाइनलमा गए। त्यहाँ चार्ली चाप्लिनले पनि भाग लिए पनि फाइनलमा पुगेनन्। अर्को पुगे’, उनले भने, ‘हाम्रो अदालत चार्ली चाप्लिन कुनचाहिँ हो भनेर छुट्ट्याउन नसक्ने खालको छैन। खुट्टा हेरेर चिन्छ, जेल लगाएको कपाल हेरेर चिन्छ। अनुहार हेरेर चिन्छ। अनेक हिसाबले चिन्छ, कुम हल्लाएको हेरेर चिन्छ। चार्ली चाप्लिन चिन्न हाम्रो अदालतले सक्छ। हाम्रो निर्वाचन आयोगले गल्ती गर्दैन। हाम्रा न्याय निरुपण गर्ने निकायले गल्ती गर्दैन। इतिहास सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण साथीहरू ढुक्क हुनुहोस् सूर्य चिह्न हाम्रो हुन्छ। पार्टी हाम्रो हुन्छ ।’
उनले झन्डै ६४ प्रतिशत मत सर्वसम्मत प्राप्त गरेको दलका नेताले सरकार चलाउँदिनँ र ताजा जनादेशमा जान्छु भनेपछि सरकार बनाउने अर्को विकल्प नै नरहेकाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने कदम संवैधानिक भएको बताए। ‘प्रतिनिधिसभा कहीँ पुनःस्थापना हुन्छ कि ? केही साथी अझै भ्रममा हुनुहुन्छ। दुईतिहाइ झन्डै ६५ प्रतिशत दलको सर्वसम्मत नेताले म सरकार चलाउन ताजा जनादेशमा जान्छु भनेपछि कहाँबाट विकल्पको सरकार बन्छ ?’, उनले भने, ‘छानो चुहियो अर्को बनाउँछु भनिसकेपछि छानो चुहियो पुरानै छानो चाहियो भनेर हुन्छ कहीँ ? पुरानो छानो फेरि फर्किन्छ र ? त्यस्तो हुँदैन। अर्को कुनै विकल्प छैन।’
उनले पार्टीमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गरिरहेका दाहाल–नेपाल पक्षलाई गफ गरेर नबस्न आग्रह गरे। ‘उहाँहरूले बहुमत हाम्रो छ भन्नुहुन्छ। गफै त हो सम्धी भनेजस्तै हो त्यो। कहाँबाट आयो बहुमत उहाँहरूसँग ? कहाँबाट पुष्टि हुन्छ ? कुन महाधिवेशनबाट आयो बहुमत उहाँहरूसँग ? कुन अधिवेशनले भन्यो ? कहाँ छ बहुमत ? कुनै एउटा जिल्लामा, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा बहुमत ल्याएर देखाउनुस् ?’, उनले चुनौती दिँदै भने, ‘दाबी पनि कस्तो ? रेस्लिङ खेलमा रेस्लरहरूले लड्नु ओर्नु कता हो कता, पहिले नै ताज खोसेर लिन खोन्छन्। तर, रेस्लिङको कोटमा गएपछि मुक्का खाएर उही हो पारा, उहाँहरूको त्यस्तै हो। पहिले नै माला लगाउन खोज्ने ? बहुमत छ ? कहाँ पुष्टि भयो बहुमत ? कसले दियो बहुमत ? कुन कार्यकर्ता, तपाईंहरूले भोट हाल्नुभयो ? तपाईंहरुले गल्ती गरेर पनि भोट हाल्नुहुन्छ ?’
उनले निर्वाचनमा दुई अंकको सिट जितेर देखाउन पनि दाहाल–नेपाललाई चुनौती दिए। ‘उहाँहरू ठूला कुरा गरेर हिँडिरहनुभएको छ। हाम्रो प्रत्यक्षमा १६५ सिट आउँछ। म अहिले धेरै नबोलौं। धेरै बोल्दा उहाँहरू हच्किने सम्भावना हुन्छ। ठिकै मात्र भन्छु। कमसेकम दुइटा अंक भएको, दुइटा अंकसम्मको सिट ल्याएर देखाउनुस्’, उनले भने। उनले बहुमत कोसँग छ भन्ने वैशाख १७ र २७ गतेको निर्वाचनबाट देखिने बताए।
उनले दाहाल र नेपाल पक्षले आधिकारिक नेकपा र चुनाव चिह्न सूर्य आफ्नो भन्दै निर्वाचन आयोगमा दाबी पेस गरेकामा व्यंग्य गरे। ‘उहाँहरूले असली हामी भनेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन हाल्नुभएको रहेछ। यो बरमझियाको बुढाको पेडा पसल हो असली र नक्कली भनेर भन्नलाई ? जसको घर हो, ऊ निवेदन हाल्न जान्छ ? जसको जमिन हो, उसले यो जमिन मेरो हो भनेर निवेदन हाल्न जानुपर्छ ? अनि जसको गाडी हो, उसले यो मेरो गाडी हो भनिरहनुपर्छ ?’, उनले भने, ‘हामीले बनाएको पार्टी, त्यसकारण हामी निवेदन हाल्न गइरहनुपर्ने अवस्था छैन। विधिसम्मत लोकतान्त्रिक, संविधानसम्मत, पार्टीको विधानअनुसार, नियमावली, देशको कानुनअनुसार पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छौं। अब भेट्नु कुहिएर झरेका दुइटा फलहरूले रूख नै मै हुँ भनेर दाबी गर्ने ?’ अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ
प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री बहुमत